Ny fonosana sy ny firafitry ny sela
Ny membrane cell (plasma membrane) dia membrane membres somary marefo izay manodidina ny cytoplasman'ny sela . Ny asany dia ny fiarovana ny fahamendrehan'ny ao anaty sela amin'ny alàlan'ny famelana ireo singa sasany ao amin'ny sela, raha mitandrina ny zavatra hafa. Izy io koa dia toy ny fototry ny firaiketana amin'ny cytoskeleton amin'ny zavamananaina sasany sy ny rindrin'ny sela amin'ny hafa. Noho izany, ny selan'ny sela koa dia manohana ny sela ary manampy amin'ny fitazonana ny endriny.
Ny singa iray hafa amin'ny membrane dia ny mifehy ny fitomboan'ny sela amin'ny alàlan'ny balan'ny endocytosis sy ny exocytosis . Ao amin'ny endocytosis, ny lipida sy ny proteinina dia esorina avy ao amin'ny tranom-behivavy raha toa ka misy tsiranoka ao anatiny. Ao amin'ny exocytosis, ny vesicles misy lipida sy proteinina mikotrika amin'ny sela maniry amin'ny fitomboan'ny cellule. Ny selan'ny biby , ny sela , ny cellules prokaryotic , ary ny cellules fungal dia manana plasma membranes. Ny organelles ao anatiny koa dia voafetra amin'ny alikaola.
Ny rafitra membrane cellule
Ny proteinina sy ny lipida dia singa miavaka amin'ny sela . Miankina amin'ny toerana sy ny anjara andraikitry ny membrane ao amin'ny vatana ny lipida afaka mamorona amin'ny 20 ka hatramin'ny 80 isan-jaton'ny membrane, ary ny sisa dia proteinina. Ny lipida dia manampy amin'ny fandefasana membranes ny habetsahany, ny proteinina dia manara-maso sy mitazona ny toetran'ny simika ao amin'ny sela ary manampy amin'ny famindrana molekiola manerana ny tranobe.
Cell Levitra Membrane
Ny Phospholipids dia singa lehibe amin'ny selan'ny sela. Ny phospholipida dia manamboatra bilayer lipid izay manangona ny cytosol sy ny hafanana hafanana, raha toa ka mitodika lavitra ny cytosol sy ny fluid-n'ny hafanana izy ireo. Ny lipid bilayer dia semi-permeable, ka mamela ny molekiolana sasany hiparitaka manerana ny tranobe.
Ny cholesterol dia singa iray hafa amin'ny lokidran'ny sela biby. Ny molekiolan'ny cholesterol dia miparitaka miely eo amin'ny phospholipidan'ny membrane. Izany dia manampy amin'ny fitazonana ny foibem-parabolan'ny sela amin'ny fihenam-bidy amin'ny fisorohana ny phospholipids tsy ho tafaraka akaiky loatra. Tsy hita ao amin'ny fonon-java-manify ny sela.
Ny glycolipids dia miorina eo amin'ny rindran'ny sela ary misy siramamy siramamy azo avy aminy. Manampy ilay sela hahafantarana ireo sela hafa amin'ny vatana.
Proteinina membrane cellule
MAURIZIO DE ANGELIS / SCIENCE FOTO LIBRARY / Getty Images
Ny proteinina ao amin'ny sela dia misy karazana proteinina mifandray amin'izany. Ny proteinina membrane peripheral dia ivelany sy mifandray amin'ny membrane amin'ny fifandraisana amin'ny proteinina hafa. Ny proteinina membrane integral dia napetraka ao amin'ny tranom-paty ary ny ankamaroan'ny dia mandalo amin'ny membrane. Ny ampahany amin'ireo proteinina transmembrane ireo dia mibaribary amin'ny lafiny roa amin'ny membrane. Ny proteinina proteinina ao amin'ny sela dia misy karazany maro.
Ny proteinina fototra dia manampy ny manome ny fanohanana sy ny endrika sela.
Ny proteinina protectoran'ny sela dia manampy ny sela hifandray amin'ny tontolo iainany ivelany amin'ny alàlan'ny fampiasana hormones , neurotransmitters ary molekiola hafa.
Ny proteinina mitondra fiara , toy ny proteinina globular, ny molekiolan'ny fitaterana manerana ny sela membranes amin'ny alalan'ny diffusion mora foana.
Ny glycoproteins dia manana kôlejy hiohatra amin'ny vatany . Izy ireo dia tafiditra ao amin'ny tranom-behivavy ary manampy amin'ny sela ho an'ny fifandraisana fifandraisana sy ny fifindran'ny molekiolan'ny totozy.
Misy organila sela koa voahodidin'ny proteinina. Ny nosy , endoplasmic reticulum , vacuoles , lysosomes , ary ny fitaovana Golgi dia ohatra amin'ny organelle membrane mifandray. Ny Mitochondria sy ny chloroplasts dia voafatotry ny diky roa. Ny membranes misy ireo organelles samihafa dia miovaova amin'ny asan'ny molekiola ary mifanaraka tsara amin'ny asa ataony. Ny membranes organelles dia manan-danja amin'ny sehatr'asa tena manan-danja maro toy ny proteine ​​synthesis , ny famokarana lipida, ary ny solika .
Tranon'ny sela Eukaryotic
Ny singa simika dia singa iray monja amin'ny sela. Ireto tranon'ny sela ireto ihany koa dia hita ao amin'ny cellule eukaryotic biby:
Centrioles - manampy amin'ny fikarakarana ny fivorian'ny microtubules.
Chromosomes - ADN cell cellphone.
Cilia sy Flagella - fanampiana ao amin'ny toeram-piarovana.
Endoplasmic Reticulum - manambatra kôbhydrate sy lipida.
Fitaovana Golgi - manamboatra, mivarotra sy manamboatra vokatra avy amin'ny sela.
Lysosomes - manaparitaka macromolecules cellules.
Mitochondria - manome hery ny sela.
Nucleus - manara-maso ny fitomboan'ny sela sy ny fananganana.
Peroxisomes - manala vinaingitra toaka, asidra asidra, ary mampiasa oksizenina handripahana ny menaka.
Ribosomes - tompon'andraikitra amin'ny famokarana proteinina amin'ny alalan'ny fandikan-teny .
Rahavavy Chromatids: Famaritana sy ohatra
Peroxisomes: Organika Eukaryotic
Inona no atao hoe Anaphase amin'ny biology?
Polymers biologiques: Proteins, hydrocarbons, lipids
Fampidirana amin'ny hormones
Sarin'ny Golfer Paula Creamer
Jeografia ao amin'ny Nosy efatra lehibe any Japon
Stonehenge: Famintinana ny Fikarohana ambanin'ny tany ao amin'ny Monument Megalithic
Ahoana ary ny fotoana tokony hampiharana ny tombontsoa azo amin'ny fiantohana ara-tsosialy
Ny famoahana ny jiro
Vikida Vikings-Saxon: Battle of Ashdown
Porofo ara-javakanto: Famaritana sy ohatra
Ahoana ny fametrahana ny ordinateranao ho toy ny Desktop
Inona avy ireo singa niorenan'ny rafitra metisy?
Fametrahana vokatra vaovao - Idioms ao amin'ny faritra
Ny Gold Rushes
Ny maha-zava-dehibe ny mpampianatra mahomby amin'ny mpampianatra mpampianatra
Vehivavy mainty izay mihazakazaka ho filohan'i Etazonia
Famaritana ankapobeny (Chemistry)
Inona no ninoan'i Hitler?
Abraham Lincoln Teny nindramina Tokony ho Fantatry ny rehetra
Inona no Heloka Bevava?
Ady ady tany Teutonic tao Grunwald (Tannenberg)
Free Lesona fampisehoana maimaim-poana ho an'ny mpianatra
Mpikambana ao amin'ny Mpikatroka sy ny Tantara
Central University University Admissions